Monsignor Hoser na-ekwu "ihe ịrịba ama Medjugorje nke Churchka dị ndụ" | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Monsignor Hoser na-ekwu "ihe nrịba ama Medjugorje nke Churchka dị ndụ"
di Paolo Tescione - Ọktoba 11, 2020
"Medjugorje bu ihe iriba ama nke uka di ndu". Achịbishọp Henryk Hoser, Polish, ndụ gara aga yana ọrụ n'Africa, France, Holland, Belgium, Poland, abụla onye nnọchi anya Pope Francis ọnwa iri na ise na parish Balkan mara n'ụwa niile maka ebubo Marian pụtara nke malitere na June 26, 1981. na - dịka ụfọdụ ndị isi isii a na-ebo ebubo metụtara - ka na-aga n'ihu. Ọ ka mechara catechesis jupụtara na ndị njem ala Italiantali, na nnukwu "ime ụlọ edo edo" na-esokwa liturgies site na mkparịta ụka vidiyo, n'ihi na ọbụla nnukwu ụka ezughi oke.
"Katidral" wuru n'ụzọ a na-apụghị ịkọwa akọwa n'ime ime obodo na-ebighị, nke ọma tupu ịpụta ...
Ọ bụ ihe ịrịba ama amụma. Taa ndị njem ala nsọ si n'akụkụ ụwa niile, si mba 80. Anyị na-anabata ihe ruru nde mmadụ atọ kwa afọ.
Olee otú ị foto a eziokwu?
Na ọkwa atọ: nke mbụ bụ mpaghara, parish; nke abụọ bụ nke mba ụwa, jikọtara ya na akụkọ ihe mere eme nke ala a, ebe anyị na-ahụ ndị Croat, ndị Bosnia, ndị Katọlik, ndị Alakụba, Ọtọdọks; mgbe ahụ ọkwa nke atọ, mbara ala, ndị bịara site na kọntinent niile, ọkachasị ndị na-eto eto
You nwere echiche gị banyere ihe omume ndị a, na-atụlekarị ya?
Medjugorje abụkwaghị "ebe enyo". Pope zitere m ịkwalite ọrụ ụkọchukwu na parish a, nke jupụtara na ferment, na-eme nke ọma n'okpukpe na-ewu ewu, nke gụnyere, n'otu akụkụ, ọdịnala ọdịnala, dịka Rosary, Eucharistic ofufe, njem nsọ. , Via Crucis; nke ọzọ, site na mgbọrọgwụ miri emi nke Sakrament dị mkpa dịka, dịka ọmụmaatụ, Nkwupụta.
Kedu ihe na-emetụ gị, ma e jiri ya tụnyere ahụmịhe ndị ọzọ?
Gburugburu nke na-enyefe ịgbachi nkịtị na ntụgharị uche. Ekpere na-eme njem ọ bụghị naanị n'okporo ụzọ Via Crucis, kamakwa na "triangle" nke ụka San Giacomo sere, site n'ugwu ngosipụta (Blue Cross) na Ugwu Krizevac, onye nzukọ ya kemgbe 1933 nwere nnukwu obe acha ọcha, chọrọ ime mmemme, ọkara narị afọ tupu ngosipụta ahụ, ụbọchị ncheta afọ 1.900 nke ọnwụ Jizọs. Ebumnuche ndị a bụ ihe mejupụtara njem uka na Medjugorje. Ọtụtụ n'ime ndị kwesịrị ntụkwasị obi abịaghị maka ngosipụta. Mgbe ahụ, ịgbachi nkịtị nke ekpere na-eme ka nkwekọ egwu nke so na ọdịbendị a dị nro, dị nro, na-arụsi ọrụ ike, mana juputara na nro. A na-eji ọtụtụ iberibe Taizè. N'ozuzu, a na-eme ikuku nke na-eme ka ntụgharị uche, ncheta, nyocha nke ahụmịhe nke mmadụ, na n'ikpeazụ, maka ọtụtụ, ntụgharị. Ọtụtụ na-ahọrọ oge abalị iji gbagoo ugwu ma ọ bụ ọbụna n'Ugwu Krizevac.
Kedụ ihe jikọrọ gị na "ndị ọhụụ"?
M zutere ha, ha niile. Na mbu ezutere m ano, emesia ndi nke abuo. Onye ọ bụla n’ime ha nwere akụkọ nke ya, ezi na ụlọ nke ya. Odi nkpa, ha tinye aka na ndu ndi parish.
Kedu ka i bu n’obi na-arụ ọrụ?
Karịsịa na ọzụzụ. N'ezie, ọ dịghị mfe ikwu maka nhazi maka ndị mmadụ, ndị nwere oge na usoro dị iche iche, gbara ama ịnata ozi sitere n'aka Meri ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 40. Anyị niile maara na onye ọ bụla, gụnyere ndị bishọp, chọrọ nhazi na-aga n'ihu, ọbụlagodi na gburugburu obodo. Akụkụ iji wulie ike, ya na ndidi.
You na-ahụ ihe egwu na itinyekwu uche n'okpukpe Marian?
Ọ dịghị ma ọlị. Ndị na-ewu ewu pietas ebe a na-adabere na onye Madonna, Queen of Peace, mana ọ ka bụ òtù nzuzo nke Christocentric, yana akwụkwọ iwu bụ Christocentric.
Nwere esemokwu ha na diocese nke Mostar belatara?
Enweela nghọtahie na isiokwu nke ngosipụta ahụ, anyị etinyela mmekọrịta na karịa mmekọrịta niile na ọkwa ụkọchukwu, ebe ọ bụ na mmekọrịta ahụ amalitela n'enweghi nchekwa.
Ọdịnihu dị a doaa ka ị hụrụ maka Medjugorje?
Ọ dịghị mfe ịza. Ọ dabere n'ọtụtụ ihe. Enwere m ike ịkọ ihe ọ bụ na otu esi ewusi ya ike. Ahụmahụ nke ọrụ okpukpe na nke ndị ụkọchukwu na-apụta site na 700 doro anya na-ewusi njirimara Ndị Kraịst ike, njirimara kwụ ọtọ nke mmadụ, site na Meri, na-echigharịkwuru Kraịst ahụ bilitere. Nye onye ọ bụla chere ya ihu, ọ na-enye onyonyo nke Nzukọ a ka dị ndụ zuru oke yana ọkachasị nwata.
Nwere ike ịgwa anyị ihe kacha emetụ gị n’ọnwa ndị a.
Ndi nke anyi bu ulo uka dara ogbenye, na ndi nwere ndi ukochukwu ole na ole emego nke ime mmoo n’ihi otutu ndi nchu aja na-eso ndi njem a. Ọbụghị naanị. Otu nwa okorobịa Ọstrelia, bụ́ onye aholicụrụma, nke na-a drugụ ọgwụ ike, gburu m. N'ebe a, ọ gbanwere wee họrọ ịbụ ụkọchukwu. Nkwupụta na-akụ m ihe. Onwere ndi na-abịa n’uche, ọbụnadị iji kwuputa. Enwere m ọtụtụ puku mgbanwe.
Oge mgbanwe a nwekwara ike ịbịa site na ịmara Medjugorje dị ka ndị nnọchi anya ọgbakọ ndị nnọchiteanya?
Anaghị m achịkwa ya. A nabatara ahụmịhe nke onye ozi nke Holy See nke ọma, dị ka ihe ịrịba ama nke imeghe maka ahụmịhe okpukpe dị mkpa, nke ghọwo ntụ aka na ọkwa mba ụwa.